Xikmado Archives - Daryeel Magazine
Hadyadda: – Ha dayicin fursad aad qof kugu dheer ku gaadhsiin karto hadyada ama ugu yaraan Salaan qaaliya. – Ha ka warwarin hadyad lagu siiyey yarideeda, muhiimaddu maaha qiimaha shayga ee waa in uu qofkani ku xasuustay kuuna muujiyey in uu kuu gacan furan yahay. – Hadyaddu waxa ay beertaa Kalgacalka, waxa aanay kordhisaa Jacaylka. – Hadyad aad cid siin …
Xikmad Dahabi Ah
1. Cabirka Shumaca waa kala duwanaan karaa laakiin waxay bixiyaan iftiin isku mid ah, ma aha Halka aad joogto iyo derajada aad leedahay laakiin waa Tayadaada & dadnimadadaada waxa kaa dhiga inaad iftiin u noqoto Umada. 2. Tus Xushmad xitaa dadka aan u qalmin; Ma aha ka falcelin dabeecadooda, laakiin waa sawir ka bixin adiga dhaqankaaga qadarinta ku dhisan 3. …
1. Mararka qaar waxaa wanaagsan in qofku iska aamuso inti uu dadka u sheegi lahaa dareenkiisa sababtoo ah way ku sii dhaawaceysaa keliya goortii aad ogaato inay ku maqli karaan laakiin aysan ku fahmi karin 2. Waxaan ka xiran karnaa indhaha waxyaabaha aynaan rabin in aan aragno laakiin kama xiran karno qalbigeena waxyaabaha aynaan rabin in aan dareeno. Aad bay daruuri …
1- Dadaal iyo qiime waxaan ku bixinaa xirashada dharka ugu qurxoon iyo kuwa ugu qaalisan, balse waxaan is ilowsiinaa bedelista dhaqamada iyo dabeecadaheena guracan. Ogow, weelka qaaligaa ma sameeyo cunto dhadhan macaan. 2- Caqabaduhu geeri ama dhimasho ma keenaan, balse dilaaga noloshu waa murugada iyo welwelka. 3- Guul gaaristu lugo uma baahna ee dhiirasho ayey u baahantahay. 4- Niyad wanaag …
Xikmad Dhiirra-Gelin Ah
1. Saaxiibtinimadu ma aha qofka aad waqtiga ugu dheer taqaanay. Saaxiibku waa qofka intuu kuu yimaado ku yiraahdo; anigaa halkan kuu jooga oo ku garab taagan, ficilna ku cadeeya 2. Ka faa’iideyso oo si fiican u isticmaal waqtigaaga. Dib waad u aqrisan kartaa qoraal, fariin ama Buug, Waad ku soo ceshan kartaa video muuqaal ah ama mid dhageysi ah laakiin …
Odhaahyo Xikmadeysan Oo Ku Saabsan Isfahamka Ragga & Dumarka
– Jacaylku waa shaqada qofka bilaa camalka ah, iyo nasashada qofka shaqeeya. – Qof aan sabir lahayn jacayl kama guul gaadho. – Bariga gabadhu wejiga ayaa ay qarsataa, galbeedkana lugaha. – Jacaylku waxa uu keliya ku noolaan karaa hadal cad oo aan waxba la isku qarin, taasina waa dhaqan aanay gabadhu jeclayn. – Guurka iyo gabowguba ninka waa u edbin …
– Gabadha Talyaani haddii aad jacayl u sheegato kuma rumaysanayso in aad dhab u jeceshay illaa aad darteed dhagar u gasho, Gabadha Inigiiris jacaylkaaga ma rumaysanayso illaa aad xoolo badan ku bixiso. Laakiin gabadha carbeed in aad jeceshay waxa ay rumaysanaysaa oo keliya marka aad guursato. – Dagaalku waxa uu leeyahay xeer la iska yaqaanno oo ah, “Goob kasta oo …
1. Ma joojin kartid carabyada (hadalada) dadka laakiin ha u oggolaan carabyada (hadalada) dadka inay adiga ku joojiyaan 2. Jooji fakirka ah in aad duruuftan adag & dhibkan weligaa ku jiraysid. Sida xilliyada sanadka isu bedelaan ayay xaaladuhu isu bedelaan, noloshu waa wareeg, mana jirto wax sidooda iska ahaanaya weligood, xitaa naftaada waxay leedahay taariikh ay dhacay 3. Wax wanaagsan …
Hal-ku-dhegyo Iyo Hadallo Xikmad Leh
1. Ha ku ciyaarin shucuurta dadka kale, waa suurtogal in aad ciyaartaa ku guulaysato (Ka gaadhay danta aad ka lahayd ) laakiin khatarta ka dhalanaysaa waa in aad qofkaas weydo. (William Shakespeare) 2. Qofka doonistiisa sharci ka dhigaa, sharci la’aan ayaa uu dhacaa. (Shakespeare) 3. Haddii aad doonayso in aad goyso qof aad jeceshay ama saaxiibkaa, dhaawac ha kaga tegin.. Qofka qalbigiisa ina …
Xikmado Taabagal Ah
1. Aduunkan Qofna ma aha qof ceeb ka saliim ah, haddii aad qof kaga fogaato qalad uu sameeyay, waxaad weligaa keli ku ahaanaysaa dunidann. Wax yar xukmi, wax badan Jeclow 2. Jooji in aad ka murugooto kuwa wax ka sheega noloshaada! Had iyo jeer waxaa jiraya qof aan fikrad ka haysan dhibka aad u soo martay si aad u gaarto …
1. Kolki uu rabo inuu aamus ku yiraahdo haweenay, ninka caadiga ah wuxuu ku yiraahdaa “Naga Aamus” ninka caaqilka ah wuxuu ku dhahaa “Bushimahaaga aad bay u qurux badan yihiin marki aad isku qabato!” 2. Sida loo xusho saaxiib fiican sanadahan dambe; Haddii saaxiibkaa ku hilmaansiiyo mobile-ka in aad eegto waa saaxiib fiican, laakiin haddii aad mobile kaga mashquusho waa …
1. Qofna ma aha qof dhameystiran oo ceeb ka saliim ah Dunidan. Hadii aad kaga fogaato dadka qaladaadkooda, waxaad weligaa keli ku ahaaneysaa Aduunka. Xukmi wax yar, Jeclow wax badan 2. Geesinimadu ma aha in aadan cabsan. Geesinimadu waa in aadan u oggolaan cabsidaada in ay ku joojiso 3. Mar kastoo aad is tiraahdo maanta maalin xun ayay ii tahay, …
Weedho Wacan oo Waxtar Leh
1. Qorrax-dhaca halkan waxay Qorrax soo bax u tahay dhinac kale oo Aduunka ka mid ah. Marnaba ha quusan sababtoo ah wax u muuqda dhamaad ayaa xaqiiqdii ah bilow cusub. 2. Haddii dhibic biyo ah ku dhacdo Haro, muuqeedi wuu lumayaa; Haddii ay ku dhacdo caleen geed Ubax ah, aad bay u iftaa; Dhibicdu waa isku mid; laakiin wehelka, halka ay …
Ka Faaidayso Xikmado Dhaxalgal Ah
1. Geedka waxaa lagu qiimeeyaa miraha ama harka uu bixiyo, bini’aadanka waxaa lagu qiimeeyaa ficilada ay sameeyaan. Camalka wanaagsan marnaba ma khasaaro; Qofka beerta aadaab & hab dhaqan wanaagsan wuxuu gurtaa miraha xushmada iyo jaceylka dadka u hayaan 2. Ka fogow Xanaaqa, adiga keliya ayay ku dhaawacaysaa. Maxaad la caroonaysaa? Hadii aad saxsan tahay looma baahna in aad carooto, hadii …